Vazaha matin’ny pesta : mitaky fanaovana “autopsie” fanindroany azy ny havany | NewsMada
Vazaha matin’ny pesta : mitaky fanaovana “autopsie” fanindroany azy ny havany
Tonga hatrany ivelany mihitsy ny laza ratsin’i Madagasikara manoloana ny valanaretina pesta mahazo vahana tato ho ato. Teratany frantsay iray namoy ny ainy tao Toamasina, ny faran’ny herinandro teo. Tsy manaiky anefa ny havany fa mangataka ny hanaovana autopsie fanindroany ilay Frantsay namoy ny ainy…
Ho avy eto Madagasikara ka hihazo an’i Toamasina ny fianakavian’ilay teratany frantsay namoy ny ainy izay voalaza fa matin’ny pesta. Voalazan’ny loharanom-baovao fa tsy hanaiky ireto fianakaviany ireto fa hangataka amin’ny tompon’andraikitra ao Toamasina ny hanaovana autopsie fanindroany indray an’ity teratany frantsay voalaza fa matin’ny pesta ity. Miahiahy izy ireo fa misy zavatra hafahafa ambadik’izao nahafaty ity teratany frantsay ity izao.
Tsiahivina fa mpandraharaha amin’ny fikirakirana momba ny trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny ao Ampanalanina Toamasina ity teratany frantsay antsoina hoe Philippe, 40 taona ity. Notsaboina tao amin’ny Hopitalibe Toamasina, sampana misahana ny aretin-tratra sy avokavoka PPH (Pneumologie et Phitosiologie) izy andro vitsivitsy mialoha ny nahafatesany, saingy nitsoaka ny toeram-pitsaboana azy. Tsy vitan’izay fa mbola nanao fiteny hafahafa tamin’ireo dokotera nitsabo azy izy, araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana. Ny asabotsy 21 oktobra 2017 tamin’ny 2 ora maraina, tonga tampoka tao amin’ny sampana vonjy taitran’ny Hopitalibe nentin’ny fianakaviany indray ity teratany frantsay ity, saingy efa tsy avotra intsony ny ainy. Niezaka niala nenina taminy ihany ny mpitsabo, saingy nihombo hatrany ny aretiny ka namoy ny ainy avy hatrany izy. Nanamafy ny eo anivon’ny Hopitalibe Toamasina fa pesta tao amin’ny avokavoka ny nahafaty azy.